Imimmiselo yokusebenzisa & umthetho wabucala | mobilecasinofreebonus.com |
ikhaya » Ifowuni Casino Bill & Mfono Slots Promos £ 20, £ 10, £ 100, £ 1000 ikhululeke! » Imimmiselo yokusebenzisa & umthetho wabucala | mobilecasinofreebonus.com
Imiqathango Web Site kunye Miqathango yokuSebenzisa & umthetho wabucala
Ngokungena kweli ziko lewebhu, , uyavumelana kubopheleleka kwezi meko site web kwaye Miqathango yokuSebenzisa, yonke imithetho esebenzayo kunye nemimiselo, kwaye uyavuma ukuba unoxanduva lokuthobela kunye nayiphi na imithetho wengingqi. Ukuba akuvumelani nayo nayiphi na kwezi, ukuba abavumelekanga ukusebenzisa okanye ekufikeleleni kule site. Izinto eziqulathwe kule site web akhuselwe esebenzayo wokubiwa uphawu lorhwebo umthetho.
2. Sebenzisa License
Imvume sivunyiwe ukulayisha ezantsi enye ikopi izinto okwethutyana (ulwazi okanye isoftwe) kwisiza web MobileCasinoFreeBonus.com ngayo buqu, non-ezorhwebo kokubonisela ziyadlula. Esi sibonelelo ilayisenisi, hayi zeentlawulo isihloko, yaye u nga phantsi kwalo ilayisensi:
zizilungise okanye ukope izinto;
ukusebenzisa izinto nayiphi na injongo yorhwebo, okanye nawuphi na umboniso kawonke (zorhwebo okanye non-yorhwebo);
azame decompile okanye umva kukucwangcisa nayiphi isoftwe oluqulethwe kwi site web MobileCasinoFreeBonus.com ngayo;
ukususa nawuphi na copyright okanye ezinye olubhalo lokushishina ukusuka izinto; okanye
ukutshintshela izinto komnye umntu okanye “isipili” izinto kuwo nawuphi na omnye server.
Le layisenisi kuya kunqunyanyiswa ngokuzenzekelayo ukuba wenza enye yezi izithintelo kwaye buyakupheliswa MobileCasinoFreeBonus.com nangaliphi na ixesha. Phezu ukuphelisa kokubonisela yakho kwezi zinto okanye ukupheliswa kwale layisenisi, kufuneka ukutshabalalisa naziphi na izixhobo zifumaneke ilifa lakho nokuba kwikhompyutha okanye olushicilelweyo.
Izinto kwisiza web MobileCasinoFreeBonus.com ngayo zibonelelwa “njenge”. MobileCasinoFreeBonus.com yenza akukho ziqinisekiso, wavakalisa okanye ezingachazwanga, kwaye ngokwenjenje pahaha kwaye imithetho- zonke ezinye iziqinisekiso, kubandakanywa ngokungaphandle komlinganiselo, ezingachazwanga okanye iimeko zokuthengiseka, nokufanela injongo ethile, okanye non-ikukunyasha intellectual property okanye amanye ukwaphulwa kwamalungelo. phambili, MobileCasinoFreeBonus.com awukabonisi ukuba kuqhutywe okanye enze nayiphi na inkcazelo malunga nokuchaneka, ukuba iziphumo, okanye nokuthembeka ukusetyenziswa izinto eyadini web Internet okanye ngenye enxulumene izinto ezinjalo okanye naliphi ezinxulumene kule site.
Xa kungekho ngesiganeko uya MobileCasinoFreeBonus.com okanye kubathengisi zayo kuba noxanduva lwawo nawuphi umonakalo (dibene, ngaphandle komda, umonakalo ukulahleka kwengcaciso okanye ingeniso, okanye ngenxa uphazamiseko ishishini,) evele ukusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa izinto zokufunda site Internet MobileCasinoFreeBonus.com ngayo, nokuba MobileCasinoFreeBonus.com okanye MobileCasinoFreeBonus.com ummeli ogunyazisiweyo uxelelwe ngomlomo okanye ngokubhala ibivumela loo monakalo. Kuba ezinye zolawulo musa ukuvumela umda kwi iziqinisekiso ezinokucingeleka, okanye iintsilelo lwemfanelo umonakalo esisiphumo okanye ehamba, ezi ntsilelo a awusebenzi kuwe.
5. Uhlaziyo kunye Izilungiso
Izinto ebonakala site web MobileCasinoFreeBonus.com inokuya kuquka yobugcisa, yokuchwetheza, okanye iimpazamo bokufota. MobileCasinoFreeBonus.com awukabonisi ukuba kuqhutywe ukuba naziphi na izinto eyadini web achanekile, epheleleyo, okanye ngoku. MobileCasinoFreeBonus.com unokwenza iinguqu izinto eziqulathwe eyadini web nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. MobileCasinoFreeBonus.com akuthethi, nokuba, enze naluphi na ukuzibophelela ukuhlaziya izinto.
MobileCasinoFreeBonus.com ayikhange iwuhlole zonke iindawo ezinxulumene site yayo web Internet kwaye ityala ngenxa imixholo nasiphi na isiza enjalo ezinxulumene. Ukuqukwa na unxibelelwano akuthethi States MobileCasinoFreeBonus.com lwesiza. Ukusebenzisa nasiphi na isiza web enjalo ezinxulumene kwiziko kweyomsebenzisi ojongana.
7. Imiqathango site yokuSebenzisa Uguqulo
MobileCasinoFreeBonus.com bangafundela le migaqo yokusetyenziswa kwisiza sayo web nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le site web, uyavumelana babotshelelwe uguqulelo ke ngoku nale imiselo neMiqathango yokuSebenzisa.
8. uMthetho oLawulo
Naliphi na ibango enxulumene site web MobileCasinoFreeBonus.com iya kulawulwa kwemithetho State of London ngaphandle malunga ungquzulwano yalo mthetho.
LeMimiselo Jikelele nemiqathango esebenzayo Sebenzisa le Web Site.
ukhuseleko kwakho kubaluleke kakhulu kuthi. ngokunjalo, siye oku nkqubo ukuze uqonde esiqokelela ngayo, ukusebenzisa, ukunxibelelana kwaye aveze kwaye zisebenzise ulwazi lobuqu. Le ilandelayo icacisa yethu umgaqo-nkqubo wabucala.
Phambi okanye ngexesha yokuqokelela ulwazi lobuqu, siya ukuchonga iinjongo apho ulwazi iye yaqokelelwa.
Siza eziqokelela nezisebenzisa inkcazelo yobuqu kuphela ngenjongo wokuzalisekisa abo iinjongo ezicaciswe sithi yaye ezinye iinjongo ehambelanayo, ngaphandle kokuba afumane imvume umntu ochaphazelekayo okanye njengoko kufunwa ngumthetho.
Siya kugcina kuphela inkcazelo yobuqu kangangoko kuyimfuneko ukuze kuzalisekiswe ezi njongo.
Siya ukuqokelela inkcazelo yobuqu ngokusebenzisa semthethweni ilunge kwaye, apho kufanelekileyo, ngolwazi okanye ngemvume ngamnye ochaphazelekayo.
idata yobuqu kufuneka sihambelane iinjongo apho ngayo kusetyenziswa, kwaye, kangangoko kuyimfuneko ukuze abo iinjongo, kufanele zichaneke, epheleleyo, kunye-ukuya-umhla.
Siya sikhusele iinkcukacha zakho nge njengezikhuselo zokhuseleko elifanelekileyo ngokuchasene ilahleko okanye ukubiwa, kwakunye abangenamvume yakungena, ukuxela, ukukopa, ukusetyenziswa okanye incinci.
Siya kwenza kufumaneka lula ukuba abathengi ulwazi malunga nkqubo yethu kunye nezenzo ezinxulumene kulawulo lolwazi lobuqu.
Sizimisele ukuba siqhuba ishishini lethu ngokungqinelana nale migaqo ukuze kuqinisekiswe ukuba imfihlo inkcazelo yobuqu likhuselwe kwaye igcinwe.